Plasma Mobile သည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည် Linux မှ
ငါပြောရမယ်၊ ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာ၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့် plasma မိုဘိုင်း Plasma Phone ပရောဂျက်နဲ့အတူ Ubuntu ဟာဘက်ထရီတွေတပ်ဆင်ရမယ်လို့ငါ့ရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်တွေကိုမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Plasma Phone ဟာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာအချိန်တိုအတွင်းမှာပြီးပြီလို့ငါမထင်ခဲ့ဘူး။
1 Plasma ဖုန်းဆိုတာဘာလဲ။
2 Plasma ဖုန်းအက်ပ်များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
3 ငါက Plasma ဖုန်းပေါ်မှာငါ့ယူပါ
အတိုအဖြေ: သင့်ဖုန်းပေါ်တွင် KDE။ ဆိုလိုသည်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Plasma Workspace, KWIN / Wayland နှင့် Telepathy နည်းပညာတို့ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည် Kubuntu တွင်ဖြစ်သည်၊ သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် GTK သို့မဟုတ် QT ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ application များကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုးရှင်းစွာ install နိုင်သည်။
Plasma Applications ကို။
Gnome အက်ပလီကေးရှင်းများ (ဥပမာ - GnomeChess)
X11 (ဥပမာ - xmame)
နှင့် Sailfish OS သို့မဟုတ် Nemo ကဲ့သို့သော Qt ကို အခြေခံ၍ အခြားသူများဖြစ်နိုင်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးကျန်သေးတယ် ပလာစမာဖုန်း စျေးကွက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောမိုဘိုင်းအော်ပရေတာစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တည်ငြိမ်သောမူကွဲတစ်ခုရရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်၊ LG က Nexus 5.
ငါ့မှာတစ်ခုရှိလို့ငါနည်းနည်းမှနောက်ကျမှစမ်းကြည့်မယ် ပိုပြီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်သို့သော် အကယ်၍ သင်က Nexus5ကိုအသုံးပြုလိုသည့်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်ပါကသင်ကြိုးစားရန်လိုသည် ဒီညွှန်ကြားချက်.
ငါက Plasma ဖုန်းပေါ်မှာငါ့ယူပါ
ဒါစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတယ်။ Android, iOS, Windows Phone နှင့်အခြား Sailfish, FirefoxOS သို့မဟုတ် Ubuntu Phone ကဲ့သို့သောအခြားအစရှိသည့် OS များမှာကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောအရာများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအခါဤကျောက်မျက်အနည်းငယ်သာပေါ်လာသည်။ iOS နှင့် Android အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိသော်လည်း FirefoxOS နှင့် Ubuntu Phone တို့မှာခက်ခဲသောအချိန်များရှိသည်။
FirefoxOS သည်လုံးဝချွတ်ယွင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် Applications များမရှိခြင်းနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့မီဒီယာ၌ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ရုန်းကန်နေရသော်လည်းကံမကောင်းစွာအာရုံစိုက်မှုနည်းပါးသော operating system တစ်ခု။ Plasma Mobile forum တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကမေးသည်။
အခုကျွန်တော် Firefox OS ကိုသုံးနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါ့ဘ ၀ မှာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသမျှအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း OS တစ်ခုဖြစ်သည်။ Firefox OS မပြုသော Plasma Mobile သည်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ် Firefox OS ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်တွေ့ကြုံခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ Firefox OS မပြုသော Plasma Mobile ကကျွန်ုပ်ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
Qt / C ++ နှင့် QML မူလအက်ပ်များ။
QML / ဇာတိ application များ QML နှင့်။
ပြီးတော့ငါပြောရမယ်၊ ဒါကကောင်းတဲ့အဖြေပဲ။ HTML5 ကကတိပေးထားတယ်၊ အဲဒါကအနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ Firefox OS သုံးတဲ့အချိန်ကအဲဒါဟာကတိပေးထားတာထက်မမြန်ဘူးဆိုတာပြသခဲ့တယ်။
Ubuntu ဖုန်းကဘာပြောရမလဲ။ ငါကြိုးစားခဲ့ပြီ၊ ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီ၊ ၎င်းသည် FirefoxOS ... mediocre applications များနှင့်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသောအသုံးဝင်သောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူတူပင်ကြုံတွေ့နေရသည်။ ဒါတောင်မှ Canonical လူတွေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ရှိမယ်ထင်တယ်။
Plasma Phone ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဘာမှထပ်မံတီထွင်ခြင်းမရှိဘဲသက်သေပြပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မည်သည့် application အမျိုးအစားကိုမဆို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် Qt သို့မဟုတ် GTK ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ KDE သည် Android application များကိုမူလအသုံးပြုရန်တီထွင်နေသည်ဟူသောစီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမြင်လျှင်အရာရာတိုင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုငါသိပြီးဖြစ်သည်။
Ubuntu Phone ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်၎င်းကို OSX နှင့် iOS တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်ပေါင်းစည်းမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်မဖတ်ရသေးပါ။ သို့သော်တူညီသော Plasma နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မကြာမီထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ရှားပါးသည်ဟုမထင်ပါ။
ရှေ့တွင်များစွာရှိနေသည်။ Plasma Phone သည်မပြည့်စုံပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏အမြင်အာရုံထိတွေ့မှုများပင်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အရာရာမည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်သိရန်သင့်အားဗွီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်စွန့်ခွာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Plasma Mobile ဆိုတာလက်တွေ့ဘ ၀ တစ်ခုပါ
ငါဒီစီမံကိန်းနဲ့ Sailfish ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့လက်တင်အမေရိကကိုပို့ဖို့နည်းလမ်းမတွေ့ရဘူး။
ဤစီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ် ၀ င်စားသောလက်တင်အမေရိကကုမ္ပဏီများမရှိပါ။ လက်တင်ဈေးကွက်သည်အလွန်လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီးလူအများက embedded Windows, ios နှင့် Android ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
မင်းပြောတာတွေကငါ့နိုင်ငံကို FirefoxOS ရောက်ပြီဆိုတာသတိရစေတယ်၊ ​​အဲဒါကကလေးတွေအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခု (ငါ့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း) အဖြစ်ကြော်ငြာတယ်။
ဒီသတင်းကဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ ငါ plasma နှင့် Kde ချစ်ကြတယ်။ Terminal ၏မတူကွဲပြားမှုများကြောင့်အခြားတစ်ခုသည်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
၎င်းသည် ubuntu ဖုန်းအတွက်စိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုနှင့်ပိုတူသည်။ ubuntu တွင်ပလာစမာကိုတပ်ဆင်ထားသကဲ့သို့နောင်တွင် ubuntu touch တွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်လား။ ကြီးလိမ့်မယ်
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများများများလေ၊ ပိုကောင်းလေ။ ဒီအချို့လက်တင်အမေရိကကိုရောက်ဖို့ငါစိတ်မရှည်ဘူး။ မင်္ဂလာပါ။
ဤလူများသည် Android, BB နှင့် Windows Phone များနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြproblemsနာများမရှိဘဲယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြသည်။ သူတို့ချစ်ပ်များကိုကောင်းစွာရွေ့လျားရန်လိုသည်။ အနာဂတ်၌ဖြစ်ပျက်သမျှကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
Ubuntu ဖုန်းသည် iphone ၏ဈေးပေါသောမိတ္တူဖြစ်သည်။ ဤ KDE ဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကွန်များကိုတွေ့ရသည်။
သူတို့သည်ပုံဖော်ဒီဇိုင်းများမရှိကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည် IOS အိုင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်လိုသနည်း။
Ubuntu ဖုန်းက iPhone နဲ့မတူဘူး။ ခလုတ်တွေလည်းမရှိဘူး။ ဈေးလည်းသက်သာတယ်
ပြီးတော့ပုံမှန် kde တွေအသုံးပြုတဲ့ icon တွေ၊ တစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုက ios နဲ့ဆင်တူတယ်။ numix layout ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူးယူခဲ့တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် alpha ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည် kde အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသော icon အသစ်များကိုပြပြီးဖြစ်သည်။ သင်မကြိုက်ပါကသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အချို့သောအရာများကိုအခြား interfaces ၏ဒီဇိုင်းမှကူးယူသည်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ တကယ်တော့ ios and android ၏ interfaces များသည်ကောင်းမွန်ပြီးနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတို့နှင့် Ubuntu ကဲ့သို့အယူအဆအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ။ kde သည်သမားရိုးကျ desktop တစ်ခုအတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်မိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်အလားတူပြုခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်စကားမစပ်အောင်မြင်မှုရပြီး kde desktop plasma ကိုသတိရစေသည်၊ ၎င်းသည်တူညီသောအကြောင်းအရာများပင်ရှိသည်။ အလွန်ကောင်းသောပေါင်းစည်းမှုရှိလိမ့်မယ်တူသောအသံ။
သူတို့တကယ်အောင်မြင်တယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်တယ်။ Ubuntu ဖုန်းပေါ်မှာမှန်တာလား။
ကောင်းတယ် တက်ကြွသောပလာစမာမည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ ငါထင်တယ်၊ ဒီစီမံကိန်းကတိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်သေပြီလား။ ငါ proKDE ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ဖုန်း jolla ဖြစ်မည်ဟုပြောရမည်။ သင့်ခန္တာကိုယ်ရှာဖွေမှုကာလအတွင်းသင်ဝယ်ယူသော jolla တက်ဘလက်ကိုလည်းစောင့်နေပါသည်။
KDE ၏နောက်လိုက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်ကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်လက်ထဲရှိသူများထဲမှတစ်ယောက်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်
android စမတ်ဖုန်းကို KDE နဲ့ပေါင်းပြီးမက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုကြည့်မယ်၊ ကတ်ဘုတ်ပေါ်ကအရာတွေကိုလွှဲပြောင်းနိုင်တယ်၊ တခြားအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသတိရပေမယ့်ဒီ OS အသစ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုငါသာစိတ်ကူးနိုင်တယ်၊ iOS ရှိနှင့် OSX
ငါအဲဒါကိုကြိုက်တယ်၊ သူတို့အောင်မြင်ပြီလို့မျှော်လင့်ပြီး linux ထဲမှာရှိနှင့်ပြီးသားအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တော့မယ်၊
စကားမစပ်, Firefox ဟာမှားယွင်းစွာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ OS သည် web application များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်အတွက်သိပ်မကောင်းပါဘူး
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်ဤစီမံကိန်းသည် Firefox OS (Panasonic SmartViera TV များပေါ်၌စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း) နှင့် Ubuntu Phone (လက်တင်အမေရိကရှိယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်သော) ထက် ပို၍ မြင်သာထင်သာရှိသည်။
interface နှင့်အခြားကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်အမှန်ပင်ကျိုးနပ်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သောစီမံကိန်း🙂အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည် Ubuntu ဖုန်းကိုအခြေခံသည်။ QD ကို အခြေခံ၍ KDE နှင့် Ubuntu Phone ဖြစ်ခြင်းသည်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Endika Moreno ဟုသူကပြောသည်
ငါတကယ်ဝမ်းသာတယ် ငါ KDE ကိုမသုံးပေမယ့်သူရဲ့ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့သီးခြား compiz တွေကို arch ထဲမှာကပ်ထားတယ်။ android app တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာဆိုရင်၊ ဒါက Android ကို KDE မှာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်သည် BlackBerry Passport ကိုအသုံးပြုသည်။ Android app အားလုံးနီးပါးကိုပြproblemsနာမရှိဘဲလည်ပတ်သည်။ သို့သော်ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများမပါဘဲအလုပ်လုပ်သူအများစုသည်တန်ဖိုးမထိုက်တန်ဘဲ google သည်၎င်း၏အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုအခြား OS များအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မည်ကိုငါသံသယရှိသည်။ အပလီကေးရှင်းအနေဖြင့်ဘာမှမရှိပါ၊ KDE သည် apk ထံမှအကူအညီများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Endika Moreno အားပြန်ပြောပါ
ဆိုလိုတာကအခုငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းမှာ supertux ရနိုင်ပြီလား။ XD
အလေးထားစရာမလိုတော့ပါ။ စီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင် Nexus မရှိသောကြောင့်၎င်းသည် ios နှင့် Android ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်ရသောအရာများသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပို၍ အလိုလိုသိသည်။
သေချာတာကတော့ SuperTux ကို F-Droid ကနေတစ်ဆင့် Android ကိုလာမှာပါ။
အလို! အမှန်စင်စစ်ဤစီမံကိန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းများရရှိနိုင်ပါက၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Elav ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကောင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ငါတောင်မှမသိခဲ့ဘူး)
ကောင်းသော post @elav!
စားသုံးမှု parameter ကိုတွက်ချက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့က ပို၍ တိကျခိုင်မာပြီး“ ပျမ်းမျှ” အစား“ median” ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါတို့ကိုဘာကကယ်တင်မှာလဲ။ အကယ်၍ connection တစ်ခုက memory အများကြီးကိုကုန်သွားရင်နံပါတ်တွေတက်လာလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အောက်ပါတန်ဖိုးများကိုအသုံးပြုလိုသောမှတ်ဥာဏ်ယူနစ် (KB, MB, MiB စသည်တို့) ကိုအသုံးပြုပါ။
ပျှမ်းမျှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ~ 30 ပေးလိမ့်မယ်
ပြီးတော့ဒါကငါတို့မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အစွန်းရောက် (၁၅၀) ရှိပြီးတွက်ချက်မှုတွေကအရူးပဲ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤအချက်အလက်များမှာယူခြင်း၊ နမူနာအရေအတွက်ကို ၂ (ကျွန်ုပ်တို့၏အလယ်ဗဟို) နှင့် ၄ င်းနေရာ၏နံပါတ်ကိုရယူခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒီနဲ့ငါတို့တူတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်
ဒါဆိုငါတို့ဆိုလိုချင်တာက 8/2 =4~ 10
ဒီနေရာတွင်အစွန်းရောက်မည်မျှပင်ပင်ပင်ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့အား ပို၍ လက်တွေ့ကျသောတန်ဖိုးကိုအမြဲပေးလိမ့်မည်ဟုဤတွင်သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ စားသုံးသူ ၂၀၀ ကိုစားသုံးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပျမ်းမျှ ၁၁ မှာဖြစ်ကာပျမ်းမျှအားဖြင့် ...... သို့သွားနိုင်သည်။
လူများကို linuxera လုပ်ပါ
erre က de post ကို😛
အချင်းလူ၊ အစွန်းရောက်တန်ဖိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဂျီ like မေတြီယန္တရားကဲ့သို့သောအရာများရှိသည်။ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းများကိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်အသင်းအရေအတွက်နှင့်စာရင်းဇယားများပိုမိုနီးကပ်စေရန်အတွက်သုံးနိုင်သည်။
၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာ KDE သည်ရှုထောင့်အားလုံးတွင်စိတ်ကူးယဉ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသည်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုအမြဲတမ်းကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်: အဆိုပါ applications များ။ Whatsap (ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မမှန်သည်ဖြစ်စေအမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ) မရှိသောမည်သည့် operating system မဆို၎င်း၏အခြားပြိုင်ဘက်များကဲ့သို့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အလွန်ပြည့်စုံပြီး Plasma5 နှင့်အတော်လေးကိုက်ညီသောဒီဇိုင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြောစရာများစွာရှိသောစနစ်တစ်ခုနှင့်လည်းကောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
sailfish application များကို portable လုပ်နိုင်လျှင် whatsapp တွင်ပြသနာမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် jolla တွင် whatsapp အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုရှိပြီးအနည်းဆုံးတစ်ခုမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဆာဗေးဒေါ Flores ဟုသူကပြောသည်
Salvador Flores သို့ပြန်ကြားပါ
kde mobile နှင့် kubuntu တို့ကိုမိုဘိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး dock နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက keyboard mouse ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
၎င်းသည် linux distro 100% ကိုမိုဘိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးမိုဘိုင်းကို BASE ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်လက်ကိုင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအနာဂတ်သည် linux distros များသွားရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ Samsung သည်၎င်း၏ဗားရှင်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ andorid အတွက် ubuntu သည်ဆိုးရွားစွာအောင်မြင်သော ubuntu နှင့်အတူ windows များဖော်ပြသည်။
ယနေ့ခေတ်အဆင့်မြင့်မည်သည့်မိုဘိုင်းမဆို distros ၁၀၀% ကိုသာမန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကဲ့သို့ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အရံပစ္စည်းများထားရန် dock ကို သုံး၍ BASE ကွန်ပျူတာ၊ မော်နီတာ၊ hd၊ ကီးဘုတ်သို့မဟုတ် mouse ethent printer များကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
Debian တွင် PPA repositories ထည့်ရန်